कहिलै छुट्दैन् यी राशि हुने व्यक्तिको प्रेम सम्बन्ध हेर्नुहोस !
मिथुन र तुला : मिथुन राशी र तुला राशीको प्रेम सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको छ । यी दुई राशी भएकाहरुको शारिरिक वा मानसिक दुवै रुपले मिल्ने हुन्छन्। सिंह र तुला : यी दुई राशी भएका व्यक्तिहरु पनि सामाजिक रुपमा निकेै मन पराइन्छ। समाजमा आकर्षक भएर प्रस्तुत हुने हुँदा यो जोडीलाई
शनिबार जन्मने व्यक्तिले अवश्य पढ्नुहोस् !
मानिसहरुको विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् । भारतीय अंक ज्योतिष श्रीमती ज्योतिमा
सावधान ! माछा खाँदै हुनुहुन्छ ? लासमा राखिने ‘फर्मलिन’ हालेर भारतबाट नेपालमा माछा ! जानी राखौ
भारतम प्रतिबन्धित माछा नेपालमा खुलेआम बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । भारतको आन्ध्रप्रदेशमा उत्पादन हुने र विषादीयुक्त रसायनसहित नेपाल आउने माछा नेपालगञ्जका बजारमा छ्याप्तछ्याप्ती भेटिने गरेका हुन् । भारतबाट आयात हुने माछा नेपालगञ्ज पुग्न छिटोमा पनि एक साता लाग्छ । कहिलेकाहीँ १० देखि १२ दिन पनि लाग्ने माछा व्यवसायी
वास्तु शास्त्र अनुसार यी स्थानमा राख्नुहोस् धन ! धन दोब्बर हैन तेब्बर पनि हुन सक्छ !
वस्तु शास्त्रमा ,आफूले मेहेनत गरेर कमाएको पैसा घरमा कस्तो ठाउँमा राख्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ बताइएको छ । घरको कुन दिशामा पैसा राख्दा लक्ष्मीले संधैब वास गर्छिन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाई आफ्नो कमाईबाट आर्जित धनको राम्रो संचय गर्न चाहनुहुन्छ भने वस्तुशास्त्रमा बताइएका
यस्ता लक्षण भएका स्त्रीको पछि नलाग्नुस्, जसले तपाईलाई बर्बाद बनाउँछन् !
तपाईको जन्म रातमा कि दिनमा भएको हो ? जन्म समयबाट थाहा पाउनुस् व्यक्तिको स्वभाव र भविष्य
ज्योतिषको मद्दतले जन्म समयको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको भविष्य र स्वभावको जानकारी पाउन सकिन्छ । राती जन्मेका र दिउँसो जन्मेका मानिसहरुबीच निकै भिन्नता हुन्छ । ﻿ ज्योतिषाचार्य पं. मनिष शर्माका अनुसार राती जन्मेका मानिसहरु धेरै जोखिम मोल्छन् भने दिउँसो जन्मेकाहरु काम प्रति धेरै इमान्दार रहन्छन् । दिउँसो जन्मेका मानिसहरुको स्वभावः
जानी राखौ : यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती !
वास्तुशास्त्र अनुसार परिवारका सदस्य यदि बिरामी र तनावमा भइरहन्छन् भने यसको कारण घरको मुख्यद्वार पनि हुनसक्छ । मुख्यद्वारसँग जोडिएका वास्तु दोषका कारण घरका सदस्य शारिरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा विचलित हुन्छन् । वास्तुशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थमा घरको मुख्यद्वारसँग सम्बन्धित विशेष जानकारी दिइएको हुन्छ जसबारे ध्यान दिँदा तनाव, रोग र अनावश्यक खर्चबाट
जानी राखौ : लक्ष्मीको कृपा मिल्ने र धनलाभ हुने ५ संकेतहरु !
१. यदि तपाईले सपनामा पानी, हरियाली र लक्ष्मीको वहन उल्लु देख्नुभएमा भाग्य बदलिने र प्रशस्त धन कमाउने संकेत रहने गर्छ। २. यदि तपाईको घर वा कार्यालयमा अकस्मात उल्लु आयो भने सम्झिनुस निकट भविष्यमानै धन प्राप्त गर्ने अवसर मिल्नेछ। ३. विशेषगरी शुक्रबारको दिन लक्ष्मी पूजा गर्ने भएकाले यस दिन तपाईलाई कोही
पञ्चकमा यी ५ काम नगर्दा राम्रो-नत्र तपाईलाई जिवनमा अनिष्ट हुनसक्छ !
ज्योतिष शास्त्र अनुसार पञ्चक ५ बिशेष नक्षत्रमा लाग्ने गर्दछ जो धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद र रेवती नक्षत्रमा पर्दछ। जसमा कुनैपनि शुभ काम गर्नको लागी मनाही गरिएको छ। ज्योतिषको अनुसार पञ्चक पनि अलग-अलग प्रकारको हुने गर्दछ। यदि पञ्चकको प्रारम्भ आइतबारबाट हुन्छ भने त्यसलाई रोग पञ्चक भनिन्छ। साथै सोमवारबाट शुरू
दाईजोमा सर्प दिने यस्तो गाउँ !
विवाहमा दाइजोको रुपमा रुपैयाँ, पैसा, गाडी दिनु आम चलन हो । तर, भारतको मध्यप्रदेश बसिआएका सपेरिया (सर्प नचाउने)समुदायमा अनौठो दाइजो दिन चलन छ । उक्त समुदायले दाइजोको रुपमा २१ वटा विषालु सर्प दिने गरेका छन् । यो परम्परा सदियौँदेखि चल्दै आएको छ । सर्प दाइजो दिएन भने वैवाहिक सम्बन्ध छिट्टै